COVID-19 Macluumaadka iyo Cusbooneysiinta loogu talagalay Deeqaha Adeegga Hoyla'aanta - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|COVID-19 Macluumaadka iyo Cusbooneysiinta loogu talagalay Deeqaha Adeegga Hoyga
COVID-19 Kirada Caawinta iyo Macluumaadka Guriyeynta
Kaalmada Kirada iyo Caawinta Sharciga
Gov. Jay Inslee wuxuu soo saaray bayaan mamnuucaya in guryaha laga saaro sababo la xiriira kiraystayaasha oo aan bixin karin kirada sababtuna tahay masiibada COVID-19. Ku dhawaaqistu waxay dhammaanaysaa Oktoobar 31, 2021.
Haddii aad u baahan tahay kaalmada kirada, adiga ama mulkiilahaaga ayaa la xiriiri kara ururka maxalliga ah ee gacanta ku haya codsiyada kaalmada kirada ee degmadaada: Liiska bixiyeyaasha Barnaamijka Kaalmada Kirada Ka -saaridda degmada.
Haddii aad tahay kirayste ka yar 25, waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa xaafadda Caawinta Kirada Ka Saaridda Dhalinyarada iyo Dadka Waaweyn bixiyaha barnaamijka.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira laba ilo sharciyeed oo ay heli karaan kiraystayaasha iyo mulkiilayaasha.
Barnaamijka xalinta ka saarida. Waxaad la xiriiri kartaa xarunta xallinta khilaafaadka ee xaafaddaada waxaadna weydiisan kartaa inay kaa caawiyaan xallinta arrimaha la xiriira ka saaridda. Waxaad ka heli kartaa a tusaha xarumaha halkan.
Xaqa la -talinta barnaamijka sharciga. Kireystayaasha qaata kaalmada dadweynaha ama dakhligoodu aad u hooseeyo - $ 25,760 dakhli sanadeed shaqsiyeed ama $ 53,000 qoys afar qof ah - waxay heli karaan qareen lacag la'aan inta lagu jiro dacwadaha ka saaridda. La xiriir Khadka Baadhitaanka Difaaca Ka-saarista 855-657-8387 ama ka codso onlayn org/codso-onlayn.
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud wuxuu kaa caawin karaa dacwadaha guri ka saarista COVID-19. Waxaad kala xiriiri kartaa halkan.
Barnaamijka Gargaarka Mulkiilaha Xaddidan ee Gobolka Washington wuxuu siiyaa milkiileyaasha lix ama ka yar unugyo kiro/hanti oo ka yar Dakhliga Dhex -dhexaadka Qoyska awood u leh inay ku soo kabtaan illaa 80% lacagihii kirada ee aan la bixin duruufaha u qalma. Barnaamijkan wuxuu ku kooban yahay bixinta wax aan ka badnayn $ 2,000,000 ee sheegashooyinka. Wax dheeri ah aqriso
Kheyraadka waa la heli karaa si looga caawiyo kharashyada kale - Wac 2-1-1 Si aad u hesho Macluumaad
Cudurka faafa wuxuu dad badan oo reer Washington ah ku reebay biilal iyo kharashyo lama filaan ah. Kaligaa ma tihid Wac 2-1-1 si aad ula hadasho qof kugu xiri kara barnaamijyada ka caawiya shakhsiyaadka inay bixiyaan waxyaabaha sida kirada, cuntada, khadka ballaadhan iyo waxyaabo kale oo badan.
Booqo shabakadda Washington 2-1-1.
Soo -koobidda Kaalmada Kirada
Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maamuli jirtay kaalmada degdegga ah ee kirada COVID-19 tan iyo xagaagii la soo dhaafay. Si loo maamulo barnaamijyadan, Ganacsi ayaa qandaraas la gala degmooyin. Degmooyinka waxay la shaqeeyaan adeeg bixiyeyaasha maxalliga ah si ay uga baaraandegaan codsiyada, u maareeyaan dukumiintiyada iyo warbixinnada, una soo saaraan lacago milkiilayaasha guryaha.
Mulkiileyaasha ama kiraystayaasha midkood ayaa la xiriiri kara bixiyeyaasha kaalmada kirada ee xaafaddooda, in kasta oo ay labaduba door ku leeyihiin hawsha. Lacag bixinta waxaa si toos ah loogu sameeyaa mulkiilayaasha guryaha. Degmooyinka waa inay sidoo kale siiyaan adeegyo xallinta khilaafaadka kiraystayaasha iyo milkiileyaasha guryaha.
In ka badan 37,000 oo qoys ayaa helay kaalmada kirada ilaa dhammaadka Luulyo 2021. Qiyaastii 80,000 qoys ayaa heli doona gargaar illaa Juun 2023.
Kirada dhexdhexaadka ah ee gobolka Washington waa $ 1,200.
Xogta Tirakoobka Dowladda Dhexe ayaa lagu soo warramey illaa 13% ee kireystayaasha gobolka Washington waxay ka dambeeyeen bixinta kirada horaantii 2021. Sikastaba, tiradaasi waxay hoos ugu dhacday ilaa 8% bishii Maajo 2021. Faafka ka hor, lambarkan wuxuu u dhexeeyey 3-5%.
Hoos waxaa ku qoran soo koobitaanka gobolka oo dhan ee kaalmada kirada COVID-19 oo la bixiyay ilaa maanta. Barnaamijka Caawinta Kirada Ka -saaridda ee gobolka (ERAP) wuxuu dhammaaday Juun 30, 2021. Tirooyinka Barnaamijka Kaalmada Kirada ee Hanti -dhowrka ee dawladda dhexe (TRAP 1.0) ayaa ka tarjumaya waxa Ganacsiga u soo sheego Waaxda Maaliyadda ee Mareykanka isagoo wakiil ka ah gobollada. Faahfaahin dheeraad ah, waad arki kartaa tan burburka degmada bil kasta.
Kharashka degmada ee miisaaniyadda Kirada Maaliyadda, illaa Ogosto 30, 2021
Source: Khasnadda Mareeykanka
Kharashka Degmada Kaalmada Kirada ilaa Agoosto 31 2021
Kaalmada Kirada Darajada Gobolka ilaa Agoosto 31, 2021
Lacagaha ayaa la qaybiyey laga bilaabo Luulyo 31, 2021
Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) 2020 maalgelinta tooska ah ee gobolka Washington Barnaamijka Caawinta Kireynta Guri ka saarida (ERAP) Ogosto 2020 - Juun 2021 (barnaamijku wuu xiran yahay) $ 110M $ 93,915,815
Lacagta Xisaab celinta Jawaabta Musiibada Gobolka Ogosto 2020 - Juun 2021 (barnaamijku wuu xiran yahay) $ 43.5M $ 85,180,241
Ka-jawaabista Coronavirus iyo Gargaarka Kaabista ee Kaabista Gargaarka (CRRSA) Barnaamijka Caawinta Kireynta Hanti-dhowrka (TRAP 1.0) Maarso 2021 - Sebtember 2022 $ 322.1M $ 59,463,220
Sharciga Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka (ARPA) ?? Lacagaha Gargaarka Kirada Degdega ah Barnaamijka Caawinta Kirada Maaliyadda (TRAP 2.0) Oktoobar 2021 - Sebtember 2025 $ 255M (Barnaamijku wuxuu bilaabmayaa Oktoobar 2021)
Sanduuqa 'ARPA Coronavirus State Fiscal Recovery Fund' Barnaamijka Caawinta Kirada Guriga Ka saarida (ERAP 2.0) Oktoobar 2021 - Disember 2024 $ 403M (Barnaamijku wuxuu bilaabmayaa Oktoobar 2021)
Halkan Guji si aad uhesho Hanuuninta COVID-19 ee loogu talagalay Barnaamijyada Adeegga Hoyla'aanta iyo Dowladaha Hoose
Guji xiriiriyeha kore si aad u hesho deeqaha deg-degga ah ee deeqaha ah iyo hagista deeq-bixiyeyaasha ee ka jawaabaya safka faafa ee COVID-19.
Fadlan ogow in COVID-19 ay tahay arrin la xiriirta caafimaadka, isla markaana tilmaamaha ugu fiican laga heli karo Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington (DOH) website iyo iyadoo loo marayo hagitaan ay soo saartay waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaankaaga DOH sidoo kale waxay bixisaa COVID-19 qalabka waxbarashada oo ku qoran 26 luqadood. Haddii aad filayso in aad la kulanto COVID-19, fadlan raac DOH iyo Xarunta Xakamaynta Cudurrada (CDC) shuruudaha iyo tilmaamaha. Tilmaanta ku saabsan sida looga hortago loona maareeyo faafitaanka COVID-19 ee goobaha hoy la'aanta, fadlan eeg Ganacsiga hagitaan kumeelgaar ah.